AKHRISO: Dhacdooyinkii ugu waa weynaa toddobaadkii tagey ee Soomaaliya – Xorriya Online
AKHRISO: Dhacdooyinkii ugu waa weynaa toddobaadkii tagey ee Soomaaliya
Warbixinta Dhacdooyinkii ugu waa weynaa toddobaadkii tagey ee Soomaaliya, waxaan adinku soo gudbinaynaa Wararkii ugu waaweynaa ay Xorriya Online tebisay toddobaadkii lasoo dhaafay. Haddaba kala soco halkaan macluumaadkii ku dhaafay toddobaadkii tagey ee Soomaaliya.
18 January 2021: Madaxweynihii 7-aad ee Soomaaliya ahna Guddoomiyaha Midowga Musharixiinta Madaxweynaha Shariif Sheekh Axmed ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaaladda Siyaasadeed ee dalka iyo muranka ka taagan Arrimaha doorashooyinka.
Dhacdo 2-aad: Taliyihii Ciidanka DF ee Baardheere Maxamed Dheere ayaa u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray qarax magaaladda banaankeeda lagula eegtay gaarigiisa maalin kahor dhimashadiisa.
19 January 2021: Afar qof oo ay ku jireen Cali Maxamed Macalin oo ahaa guddoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda Garasbaaley iyo Cabdirashiid Dubad oo isna ahaa guddoomiyaha dhalinyarada degaankaas ayaa lagu dilay Qarax miino oo Kooxda Al-Shabaab kula eegatay Gaari ay la socdeen duleedka Muqdisho.
Dhacdo 2-aad: Kooxda Al-Shabaab ayaa la wareegtay degaanka Mashallaay, halkaasoo ahayd xarun ay ku sugnaayeen Ciidamada Uganda ee katirsan AMISOM ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Hoose.
20 January 2021: Guddoomiyaha degmada Yaaqshiid Axmed Cabdullaahi Cariif ayaa ka badbaaday qarax miino oo loo dhigay inta u dhaxeysa Saldhigga Degmadaas & Isgoyska Towfiiq Degmada Yaaqshiid ee Gobolka Banaadir.
Dhacdo 2-aad: Guddoomiyaha Gobolka Mudug ee Puntland Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare ayaa abaalmarin lacageed oo dhan $500,000 (Shan boqol oo kun oo doolar) duldhigay madaxa Afhayeenka Al-Shabaab Cali Maxamuud Raage (Cali Dheere).
21 January 2021: Gudoomiyihii degmada Hodon, ee gobolka Banaadir Cabdixakiin Ciise Dhegajuun ayaa xili saqdii dhexe lagu dilay rasaas gaarigiisa ay ku fureen Ciidan boolis ah oo ku sugan jidka Aadan Cadde, ee magaaladda Muqdisho.
Dhacdo 2-aad: Sida ay sheegeyn Saraakiil ka tirsan laamaha Amniga Soomaaliya, madaxii ajaanibta Al-Shabaab kaas oo magaciisa lagu sheegay Sheekh Thaabit iyo saraakiil la socotey ayaa lagu dilay duqeyn ka dhacday Jubbooyinka.
22 January 2021: Xukuumada Addis Ababa ayaa beenisay in ciidamo Soomaali ah ay ka dhinac dagaalameen kuwa Federaalka Itoobiya xiligii uu dagaalka xoogan ka socdey gobolka waqoyga dhaca ee Tigray.
Dhacdo 2-aad: Madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federalka ah ee Soomaaliya ayaa habeenimadii xalay yeeshay kulan dhanka telaafanka ka dib dadaallo ay waday maalmihii lasoo dhaafay beesha Caalamka oo ku aadana khilaafka ka taagan doorashooyinka Soomaaliya.
23 January 2021: Xubno ka tirsan Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa la sheegay inay la wareegeen degmada Raaga-ceelle ee gobalka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya, balse ugu dambeyn saacado kadib ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo is-garabsanaya ayaa dib ula wareegay gacan ku heynta degmadan.
Dhacdo 2-aad: Madaxda dowlad goboleedyada ayaa kulan gaar ah yeelanaya maalmaha soo socda, Shirka oo la aaminsan yahay in ay qabab qaabiyeen Wakiilada Beesha Caalamka ayaa Madaxda Dowlad Goboleedyada lagu amray in ay isku tanaasulaan oo ay ka gudbaan qilaafka dhexdooda ka jira.
24 January 2021: Agaasimaha Hay’adda Socdaalka iyo Jinsiyadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Aadan Koofi ayaa sheegay in ay qabteen Shabakado isku xiran oo ka shaqeyn jiray Arrimo la xiriira socdaalka sharci darrada ah.
Dhacdo 2-aad: Dagaal khasaare geystay oo u dhaxeeyay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab ayaa ka dhacay degmada Buula-Burde ee gobolka Hiiraan, dagaalka ayaa yimid, kadib markii koox ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda Soomaaliya iyo ciidamada Jabuuti ee ka tirsan AMISOM ay ku leeyihiin halkaasi.